2019 SAA Women's Lacrosse News - Southern Athletic Association
2019 SAA Women's Lacrosse News
Rhodes tops Centre for its fifth straight SAA Women's Lacrosse Championship
Memphis, Tenn. (April 28, 2019) - Top-seeded Rhodes defeated No. 3 seeded Centre, 14-10, to win its fifth straight Southern Athletic Association Women's Lacrosse Tournament Championship.
Cox and Young named SAA Women's Lacrosse Players of the Week
ATLANTA (April 15, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Jade Cox of Birmingham-Southern and Briann Young of Sewanee have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
Strand and Fogarty of Sewanee sweep SAA Women's Lacrosse Player of the Week awards
ATLANTA (April 8, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Sarah Strand and Hattie Fogarty of Sewanee have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
Cox and Lazure named SAA Women's Lacrosse Player of the Week winners
ATLANTA (April 1, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Jade Cox of Birmingham-Southern and Lauren Lazure of Rhodes have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
Dasch and Hardy named SAA Women's Lacrosse Players of the Week
ATLANTA (March 25, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Morgan Dasch of Hendrix and Hannah Hardy of Centre have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
Dasch and Gleeson named SAA Women's Lacrosse Players of the Week
ATLANTA (March 18, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Morgan Dasch of Hendrix and Katie Gleeson of Birmingham-Southern have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
Pike and Duff named SAA Women's Lacrosse Players of the Week
ATLANTA (March 4, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Aidan Pike of Rhodes and Lola Duff of Centre have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
ATLANTA (Feb. 25, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Morgan Dasch of Hendrix and Katie Gleeson of Birmingham-Southern have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
Hardy and Duff of Centre named SAA Women's Lacrosse Players of the Week
ATLANTA (Feb. 18, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Mary Katherine Hardy and Lola Duff of Centre have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
Dasch of Hendrix and Mapps-Whitmore of Oglethorpe have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.
ATLANTA (Feb. 11, 2019) – The Southern Athletic Association (SAA) has announced that Morgan Dasch of Hendrix and Dreshona Mapps-Whitmore have been named the SAA Women's Lacrosse Player of the Week honorees.